Yakazara Roller Fekitori - China Yakazara Roller Vagadziri uye Vatengesi
Kupatsanurwa kweMachira Iyo inogona kuve yakakamurwa kuita machira ekugadzira mapepa, machira ekudhinda, anodhinda machira, mupunga wekusungira machira, metallurgical machira uye machira ekudhinda emafuta; Zvinoenderana nepamusoro morphology, inogona kuve yakakamurwa kuita flat roller uye pateni yerabha roller; Zvinoenderana nezvinyorwa izvi zvinogona kuganhurwa mu: mabutiri machira, nitrile machira, polyurethane machira uye silicone rabha machira. Cots dzinowanzo kuve dzekunze yerabha dura, rakaoma rabha nhete, simbi musimboti, mupumburu mutsipa uye mweya vent. Kugadziriswa kwayo inc ...
Kusarudzwa kwesimbi isina simbi koni chinotenderera 1. Roller kureba kusarudzwa: Kune zvinhu zvine hupamhi hwakasiyana, roller ine yakaenzana upamhi inofanira kusarudzwa. Kazhinji, "kuendesa + 50mm" kunoitwa. 2. Kusarudzwa kwemadziro ukobvu uye shaft dhayamita ye roller: Zvinoenderana nehuremu hweyakatumira zvinhu zvakaenzana zvakagovaniswa kune vanobata ma roller, verenga inodiwa mutoro wega wega roller, kuti uone kukora kwemadziro uye shaft dhayamita yeiyo roller. 3. Roller zvinhu a ...